Alahady 3B Paka (Lk 24,38-45) 15/04/2018 | FKMP
Alahady 3B Paka (Lk 24,38-45) 15/04/2018
Fanambarana ny maha OLONTSAMBATRA an’i Ramose Lucien BOTOVASOA any Vohipeno Madagasikara.
INONA NO MBA RESAHANAO AMIN’NY HAFA ?
Nisy tanora nanontany ahy hoe inona no hataony mba hahafahany mampiova olona iray mba ho tonga kristianina ? Hoy aho namaly azy hoe tena misaotra anao fa mahatsapa tokoa ianao fa manana adidy hitory an’i Kristy amin’ny manodidina anao. Fa saingy ny adidy sy ny hatao voalohany raha hijoro ho vavolombelon’i Kristy dia tsy hoe hampiova ny hafa fa ny fisokafana amin’ny hafa amin’ny alalan’ny resaka hatao aminy sy milaza ny mahazava-dehibe sy ny fiainanao sy fahatsapanao ny fifandraisanao amin’Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Mizara sy mifampiresaka ny zava-dehibe sy zavatra tsara iainanao amin’ny maha kristianina anao. Izany no adidintsika voalohany fa tsy ny hampibebaka na hampiova ny hafa aloha.
Tsara ny mifampizara sy miresaka amin’ny hafa ny zavatra mahasoa sy mahavelom-panantenana. Toy izany no nataon’ireto Mpianatra rehefa nifanena tamin’ny Tompo izy ireo dia nizara sy niresaka tamin’ireo rahalahiny fa Velona tokoa ny Tompo ary nitondra fanantenana ho azy sy fiadanana ary hafaliana izany. Vao maika moa fa tonga teo an’ivon’izy ireo koa i Jesoa ka niteny hoe : « Ho aminareo anie ny Fiadanana ! » Moa ve tsapantsika tokoa izany hafaliana sy fiadanana omen’i Kristy antsika izany amin’ny fihaonantsika Aminy ? Inona ny hataonao mba hihaonanao Aminy ? Tsy misy olona na zavatra afaka ny hanome Fiadanana sy hafaliana ary fanantenana maharitra ho antsika eto amin’ity tany misy antsika ity hafa tsy Andriamanitra irery ihany. Inona ary no hahamenatra antsika tsy hizara sy tsy hiresaka amin’ny hafa ny Fiadanana homen’i Kristy ? Inona tokoa moa no tombontsoa soa azontsika amin’ny resaka hataontsika amin’ny hafa raha fanaratsiana na fifosana no resaka hataontsika ! Tsy aleo ve mba zavatra miteraka hafaliana toy ny nataon’ireto mpianatra no hifampiresahana toy izay resaka feno fankahalana na resaka mitondra korontana sy fisaratsarahana ! Ohatra lehibe ho antsika ny fomba fiainan’ireo mpianatr’i Kristy, very fanantenana sy hevitra fa rehefa nifanena tamin’i Kristy velona dia feno hafaliana, fanantenana, fahavitrihana sy fiadanana, ary nizara izany.
Mila mihaona matetika amin’Andriamanitra isika mba hananantsika Fiadanana marina. Mila mamaky sy mandinika ny Tenin’Andriamanitra isika mba hahafantarantsika marina ny dikan’ny fiainantsika. Ny Tenin’Andriamanitra no manampy antsika hanana fahatoniana sy fiainana anaty. Manazava ny fiainantsika mantolo Izy. Manampy antsika hiatrika ny fahakiviana, ny tsy fahasalamana Izy. Io Tenin’Andriamanitra io dia tonga teny manome fahendrena antsika, teny fankaherezana, teny manampy antsika ho tian y hafa sy ho mpiara-monina amin’ny hafa. Fa Andriamanitra mihitsy koa ange no efa nanome ny Zanany sy ny Fanahy Masina ho antsika e.
Previous Post: Sabotsy Paka 2B (Jn 6,16-21) 14/04/2018
Next Post: Talata Paka 3B ( Jn 6,30-35) 17/04/2018